Aadde Birtukaan walittiqabduu Boordii Filannoo ta'uun filatamuurratti maaltu jedhamaa jira? - BBC News Afaan Oromoo
Aadde Birtukaan Miidhagsaa walitti qabduu Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uun erga waadaa galanii booda ibsa miidiyaa biyya keessaaf kennaniin aangoo kanaaf wayita kaadhimaman bakka kanaaf gahumsa qabaa, adda addummaafi bu'aa fiduu nan dand'aa jedhee of gaafadheen fudhadhee jedhan.
''Muuxannoowwan qabu, beekumsan barnootaan horadhe walitti qabee bakkan hojiirra oolchudha. Aangoon kun aangoo kabajaan fudhatamuudhas," jedhan.
'Amanamummaafi walabummaa manneen murtii deebiisuuf hojjanna'
Uummatni sirni dimookraasii akka jiraatu aarsaa kaffaluun murannoofi qophaayina qabu agarsiisee yeroo kanarra gahuun keenya itti gaafatamummaa itti kenname milkeessuuf carraa gaariidhas jedhan Aadde Birtukaan.
Rifoormiiwwan caasaalee hundatti raawwatamaa jiran wanti isaan hafu jiraatus haalli itti jiran waan abdii namatti horu biroodhas jedhan.
Mootumman sirna dimookraasii hojiitti hiikuun barbaada jedhee murannoo isaa irra deddeebiin ibsuun isaa carraa gaarii kan biroo ta'uus himan.
Filannoowwan boordiin Filannoo Biyyaaleessaa kanaan dura gaggeessaa ture uummata biraa amanamuummaa dhabaa waan tureef ilaalcha uummataa jijiiruun hojii ifaafi bilisa ta'e akka hojjetan amansiisuun rakkisaa ta'uus kaasaniiru.
Xiinxaltootni siyaasaa maal jedhu?
Aadde Birtukaan walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa ta'uun filatamuun isaanii yaada xiinxaltoota siyaasaa bakka lamatti hireera.
Gariin filatamuu isaanii yoo deeggaran kaan mormaniiru.
Filatamuu Aadde Birtukaan muuxaanno hooggansa dhaaba siyaasaa keessatti qabdurraaan kan ka'e sirrii miti jedheen amanaa jedha xiinxalaan siyaasaa Obbo Girmaa Guutamaa.
''Itti gaafatamummaan boordii kanaa heera biyyattiifi Birtukaan ammoo hooggantuu dhaaba siyaasaa warren heera biyyaa kana mormaafi heerri biyyaa ciramee lafa bu'uu qaba jedhu hoogganaa turtee kanaaf filatamuun ishee rakkoo qabaa jedha.
"Seenaa akka hooggansa dhaaba siyaasatti qabduurraa ka'uun ''Heera biyyaaf amanamummaa qabdi jedhee amanuun na dhiba," jedha.
'Gaafa mana murtiitti ogeettii seeraa taatee hojjettu waan mootummaan jedhu diddee beekti, kanaaf dhiibbaarraa walaba ta'uu dandeessi' kan jedhu Girmaan adeemsi filmaata ishees marii dhaabbilee siyaasaa mormituun ala ta'uun isaa adeemsichaafi filmaata ishee akka mormuu sababa ta'uus hima.
Dhaabbileen siyaasaa mormituu reefuu biyyatti dabi'an dhimma filannoo dhufaa jiruu ilaalchisee wal amantaan waan hin jirreef qaamni alaa dhufe dhimmicha haa gaggeessu jechuun waan Dr. Biraanuu Naggaa dhiyeenya dubbatan waabeffatee kan himu Girmaan, sirumaa Boordiin Filannoo nama hooggantuu dhaaba siyaasaa turteen hoogganamuun amantaan akka hin jiraanne godha jedha.
Aadde Birtukaan muuxannoo hojii qaban irra bakka biraatti osoo muudamanii irraa gaarii ta'a tures jedha Girmaan.
Hanga ammaatti namni Boordii Filannoo keessa hoogganaa ture walaba ta'uu baatus ifatti miseensa dhaabaa hin turree kan jedhu Obbo Girmaan, namni hoogansa dhaaba siyaasa keessa ture bakka sana qabachuunis sirri miti jedha.
Ilaalchi siyaasaa Aadde Birtukaan akka nama siyaasaatti qaban dhaabbileen siyaasaa Oromoof balaa ta'uu danda'a jedha.
"Dhaabbileen siyaasaa Oromoo filatamuun ishee nu quuqa jedhanii gaaffii yoo dhiyeessan dhugaa qabu."
Amma loogummaa dhufuu malu hambisuuf ykn madalawaa gochuuf itti aanaan Boordii Filannoo nama yaada ishee madaalawaa gochuu danda'u ta'uu qabas jedha.
Warri deeggaran maal jedhu?
Yunivarsiitii Keelitti barsiisaa Seeraa kan ta'an Dr. Awwal Aloo ammoo Boordiin Filannoo qaama biyya dimookraatessuu keessatti gahee adda durummaa bahuudha, namni qaama kan hoogganuuf filatamus beekumsaa, muuxannoo gahaafi walaba ta'uu qabaa jedhu.
"Aadde Birtukaan Miidhagsaas qaama kan gaggeessuuf ulaagaaleee kanneen nama guutuu danda'an keessa tokko jedheen amana."
Kanaaf filatamuu isaanii akka murtee gaariitti fudhachuus dubbata.
Dhaaba siyaasaa keessatti gahee hooggansaarra nama turan ta'uun namoota tokko tokko yaaddessuu ilaalchisee isaaniis yaada kana gariin kan qooddatan akka ta'e himaniiru.
Haata'u malee dhaaba siyaasaa sana keessatti waggoota kudhan darbaniif hiramaachaa kan hin turre ta'uu sana boodas ejjeennoo siyaasaa qabaattus namni hunduu ejjennoo siyaasaa mataa isaa ni qabataa kanaaf waan addaa miti jedhu Dr. Awwal.
Wanti guddaan barbaachisu ilaalcha siyaasaa ofii gara tokkotti qabuun ykn kahuun ergama mana hojjii itti muudamanii raawwachuu danda'uudha jedha.
"Yaada siyaasaa ishee gara tokko keessee, itti gaafatamummaa itti kenname bahuu dandeessi, heera biyyattiidhaaf amanamummaa, sammuu isheef amanamummaa qabaachuu akka dandeessu kan dura eenyumaa oliyyuu gatii kaffalteen ifatti agarsiisteetti," jedha Dr. Awal.
Wayita abbootiin seeraa waan mootummaan jedhuun ala hin adeemnetti Aadde Birtukaan waan seerrii jedhuufi itti amante gochuun nama aarsaa barbaachisu bahuu dandessuu jedhan.
Dhaaba siyaasaa hoogganaa turteef looguu malti sodaan jedhu yaaddoo ta'uu hin qabu wanti guddaan "kutannoo dimookraasidhaaf qabdudha" jedha.
Kaayyoo Itoophiyaa gara sirna dimookraasitti ceesisuuf mootumman qabate Boordiin Filannoo itti gaafatamummaa gama isaanii jiru gahuumsaan akka bahu jijiiramoota isa dandeessisan hojjechuun xiyyeffannoo argachuu qabas jedhu.
"Dhaabbilee mootummaa ijaarsa dimookraasiif barbaachisan irra deebi'anii ijaaruun dirqama ta'a, seera filannoo haaromsuun dirqama ta'a, filannoo komishanaroota boordiicha keessatti hojjetanii gahumsa irratti hundaa'uun filachuunis hojii ijoodha'' jedhu.
Aadde Birtukaan hojii isaan irraa eegamu gahuumsaan akka hin bane waantoota danqaa ta'uu danda'u jedhaman keessaa tokko aadaa dhaabbilee siyaasaafi caasaalee jiranii akka ta'e Dr. Awwal ni dubbatu.
''Dhaabbileen siyaasaas dhaabbileen mootummas aadaa dimookrasii hin qaban''
Dhaabileen siyaasa dimookraasii barbaadu malee aadaan isaaaniyyuu dimookraatawaa mitis kunniin rakkoolee ijoodha jedhu.
Dhaabbaticha dura dabree jabaatee hawaasas qaamolee biroos jabeessuu qaba, Aadde Birtukaan kana gochuu dandeessi jedheen yaadas jedhu Dr. Awwal Aloo